Ny tahan'ny finday tsara indrindra | Tehirizo IZAO amin'ny volanao | Vaovao momba ny gadget
Ny tahan'ny finday tsara indrindra misy eny an-tsena
Tsy ela akory izay, misy mpampiasa fitaovana finday afaka misafidy ny tahan'ny finday vitsivitsy, izay amin'ny ankamaroan'ny tranga dia nitovy izy ireo ary tsy maintsy nandoa vola be izahay. Soa ihany fa niova be ny zava-drehetra rehefa mandeha ny fotoana ary maro ankehitriny ireo mpandraharaha finday marobe no manatrika eo amin'ny tsena manome vola be amin'ny finday. Ny sasany tena mora vidy, izay misy fahasamihafana lehibe eo amin'izy ireo ary koa miaraka amin'ny vidiny isan-karazany indrindra. Mba hanaovana izany anio dia hanao fampitahana mahaliana eo amin'izy rehetra isika. Satria sarotra ny manomboka any ho any, dia hataontsika izany amin'ny alàlan'ny fandinihana ireo taha telo voalohany azontsika karamaina izao:
Ny sarany mora indrindra: 8GB an'ny simyo amin'ny € 5
Ny tahan'ny feno indrindra: 15GB sy Virgin Telco tsy voafetra ho an'ny € 9 ihany
Ny tahan'ny finday tsara indrindra: 25GB sy finetwork tsy voafetra ho an'ny € 14,90 ihany
Ao amin'ny firenentsika dia mbola misy mpandraharaha telo lehibe toa an'i Movistar, Vodafone ary Orange, narahina lavitra avy lavitra sahady MásMóvil (tadidio fa nahazo Yoigo izy mba hanomezana ainga lehibe) ary ny Virgin Telco farany teo dia nanohana tao fanafihana nasionaly nataon'ny vondrona Euskaltel. Manodidina ireo dia manana ireo antsoina hoe mpandraharaha virtoaly manome tolotra mahaliana sy mora izahay.
Manomeza valiny Mamorona ny tahan'ny 10GB Simyo anao 10GB € 6 / volana
Rate 14.95 Amena 20GB ary tsy voafetra. € 14.95 / volana
Rate Plus 8GB antso tsy voafetra ary 8GB € 8.90 / volana
La SinFin Rate angona tsy voafetra sy antso tsy voafetra € 35 / volana
Mandehana taha ambony Orange Data tsy voafetra sy antso tsy voafetra € 35.95 / volana
Raha mieritreritra ny hanova ny mpandraharaha ianao na hanova ny tahan'ny dia mijanona miaraka aminay satria Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao ny sarany finday mora indrindra sy tsy dia lafo loatra izay misy eny an-tsena.
Ny tahan'ny finday amin'izao fotoana izao Yoigo Izy ireo dia iray amin'ireo manintona indrindra eny an-tsena, indrindra noho ny hamaroan'ny GB natolony ho an'ny mpampiasa, amin'ny vidiny somary ambany ihany. Mihamaro ny mpampiasa mizaha ny tambajotran'ireo tambajotra ho lava kokoa, indraindray mila antso mihena kokoa sy mihena ary mila bebe kokoa hananana angona azo ampiasaina hampiasa WhatsApp, Facebook na iray amin'ireo rindranasa maro hafa izay mila mifandray maharitra amin'ny Internet.
Yoigo dia nahavita naka an'ity filan'ireo mpampiasa rehetra tsy afaka lany megabytes ity ao amin'ny drafitry ny angon-drakitra. Raha ny marina dia fantatrao tsara ny sarany malaza indrindra: La SinFín. Ity taha ity dia misy GB tsy voafetra hivezivezena amin'ny findainao ary, ho fanampin'izay, manana antso tsy voafetra izy. Ny SinFín de Yoigo dia iray amin'ireo sarany vitsivitsy manolotra gigabytes be dia be toy izany handany € 35 / volana. Raha te hanararaotra an'io fihenam-bidy amin'ny volanao isam-bolana io ianao dia afaka manao izany ataovy avy eto.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy dia niala tsy ho orinasa i MásMóvil tamin'ny naha mpandraharaha finday virtoaly azy lasa mpandraharaha Espaniôla fahefatra, miaraka amin'ny fividianana Yoigo.
Mizara roa ny tolotra omen'ny MásMóvil: ny tahan'ny efa namboarin'ny Operator sy ny tahan'ny azonao ampiendrehana araka izay tianao. Ny drafitra omen'i MásMóvil antsika dia roa: 8 GB sy antso tsy voafetra ho an'ny € 8,90 mandritra ny telo volana voalohany ary 20GB miaraka amina antso tsy voafetra ho an'ny € 14,90.
Ny antso tsy voafetra no iraisan'ny isa an'ny MásMóvil izay efa namboarina. Fa raha olona misedra mihoatra ny miresaka amin'ny findainao ianao, ny safidy tsara indrindra ho anao dia ny manamboatra ny taha azonao refesina. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny manampy ny be indrindra gigs (20GB) ary miantso amin'ny 0 cents isa-minitra. Amin'ity fanaingoana ity dia afaka mamonjy euro vitsivitsy ianao raha ampitahaina amin'izay efa ananan'i MásMóvil miaraka amin'ny 8GB.
Manaova fifanekena amin'ireto sarany ireto amin'ny alàlan'ny fanindriana eto.
voasary Amin'izao fotoana izao dia miasa mafy miaraka amin'i Vodafone hanana tombontsoa ho mpandraharaha finday faharoa eny an-tsena. Ho an'izany dia nanao fanavaozana ny taha rehetra izy tato ho ato, ka nahatonga ny katalaogin'ilay be dia be indrindra sy mahaliana. Rehefa afaka fito taona dia tsy hitantsika intsony ny saram-biby malaza, fa nanome lalana ny Sarany mandeha.
Ireo mpampiasa izay mitaky be indrindra amin'ny resaka habetsahana sy kalitao dia tsara vintana, satria ny tahan'ny Go dia mamaly tsara an'ireo teboka ireo. Amin'io lafiny io dia manolotra antsika ny sanda i Orange Mandehana ambony ary miakara, izay samy manana data tsy manam-petra, ny fahasamihafan'ny tolotra tsirairay dia miankina amin'ny fahaizana mijery atiny mivantana misy kalitao avo kokoa (ny iray amin'ny HD ary ny iray hafa mahatratra ny 4K) ary samy misy antso tsy voafetra.
Saingy ny salan'isa miaraka amina gigabytes marobe hivezivezy dia tsy an'ny mpanatrika rehetra ary zavatra efa noeritreretin'i Orange izany. Noho io antony io ihany, manome tolotra telo hafa miaraka amin'ny gigs vitsy kokoa izy: Essential, Go Flexible ary Kids. Miaraka amin'ny Essential, manolotra antsika 7GB i Orange ary miantso amin'ny 0 cents amin'ny € 14,95 / volana. Ny tahan'ny Orange's Go Flexible dia manome antsika fahafaha-manana 16,67GB sy antso tsy voafetra ho an'ny € 24,95 / volana. Ary farany, ny tahan'ny Ankizy dia manana Internet hatramin'ny 2GB hatramin'ny € 8,95 / volana ary mety tsara amin'ny takelaka na solosainao findainy. Raha liana amin'ny tahan'ny Go de Orange ianao dia afaka manakarama azy ireo mora eto.
Ny orinasa mena dia iray amin'ireo lehibe ao amin'ny faritry ny Espaniôla ary mazava ho azy koa fa manome zana finday maro ihany ho antsika. Toa an'i Orange na Movistar, Vodafone dia manolotra amintsika ny karazan-taha rehetra, miaraka amin'ny toetra isan-karazany sy ny vidiny isan-karazany.
Ny orinasa miloko mena dia manakaiky ny karazana mpampiasa rehetra, manomboka amin'ireo izay mandany megabytes sy minitra betsaka indrindra amin'ireo izay zara raha mandany ny iray na ny iray hafa. Araka izany, manana isika Mobile Mini, Maxi tsy voafetra, tsy manam-petra ary tsy misy fetra ho an'ireo izay mandany be amin'ny resaka data sy minitra fandraisam-peo.
Ho an'ireo tena miresaka sy mihinana angona, manome volo tsy voafetra GB tsy voafetra ao anatin'ny 5G, Vodafone, minitra tsy voafetra. Izy rehetra dia € 47,99 / volana. Ny tahan'ny mpanelanelana dia ny fomba Unlimited Maxi miaraka amin'ny GB tsy voafetra ao anaty tamba-jotra 4G +, minitra tsy voafetra. Izany rehetra izany dia 36,99 € / volana. Ary farany, ny tsy voafetra dia tolotra misy angona tsy voafetra ao amin'ny tamba-jotra 4G (haingam-pandeha farany fampidinana 2Mbps) ary minitra tsy voafetra ho an'ny € 32,99 isam-bolana.
Raha liana amin'ny tahan'ny finday Vodafone ianao, azonao atao ny manakarama azy ireo ao anatin'ny 3 minitra latsaka eto.
Movistar na inona no itovizany, ny Telefónica taloha no mpanapaka lehibe amin'ny tsenan'ny telefaona finday, noho ny fandrakofana tsara saika isaky ny faritra eto amin'ny firenentsika ary koa amin'ny serivisy tsara atolotry ny mpanjifany. Mampalahelo fa tsy ambany dia ambany ny vidin'izy ireo tahaka ny tadiavin'ny ankamaroantsika.
Tahaka ny efa nataon'ny sisa amin'ireo mpandraharaha dia nanova ny tolotra finday ihany koa i Movistar, na dia tsy lalina toa ny nataon'i Orange aza. Amin'io lafiny io, Movistar dia manome antsika taha telo, izay miavaka ny gigabytes.
La Taham-pifanarahana Movistar 2 Azo sokajiana ho "taha fototra" satria manome antsika 5GB hivezivezy amin'ny finday ary 50 minitra amin'ny antso mandritra ny € 15 / volana. Raha miakatra ao amin'ny portfolio Movistar isika, ny taha manaraka dia ny XL Contract izay manome antsika 15GB sy minitra fiantsoana minitra tsy voafetra ho an'ny laharana an-tanety sy finday mandritra ny € 24,95 isam-bolana. Ny isa farany, ny fifanarahana tsy manam-petra, manana GB, minitra ary SMS tsy voafetra amin'ny vidin'ny € 39,95 / volana.
Mpikirakira virtoaly iray hafa izay tsy nanjavona tamin'ity lisitra ity dia Pepephone izay manolotra anay ny sasany amin'ireo tahan'ny fifaninanana indrindra, amin'ny lafiny rehetra izay ho hitantsika eo amin'ny tsena. Manokana, manolotra antsika izy io taha telo izay tena mifaninana raha ny momba ny tsena sisa. Amin'izany no ahitantsika ny taha voalohany ahitana 5GB sy antso tsy voafetra ho an'ny € 7,90 / volana. Ny tahan'ny antonony dia manome antsika 10GB sy minitra tsy voafetra ho an'ny € 11,90 isam-bolana.
Farany, hitantsika izay mety ho tahan'ny mahasoa indrindra: 39GB sy minitra tsy voafetra ho an'ny antso ho an'ny € 19,90 / volana.
Eny ry namana, niverina i Amena. Niaraka tamin'ny maro tamintsika ny mpandraharaha maintso tamin'izany fotoana izany, ary azontsika lazaina fa kilalao izy io raha ny resaka telefaona finday. Niverina tamin'ny fiainana niaraka tamin'ny Orange i Amena ary mahavariana ny tahan'ny vidiny. Io mpandraharaha io dia mitovy dika amin'ny fampifanarahana ary asehon'izy ireo mazava tsara izany miaraka amin'ny salan'izy ireo. Ny drafitra findainy dia mifantoka amin'ny karazana mpampiasa tsirairay: tahan'ny iray ho an'ireo izay mampiasa kely ny findainy, iray hafa ho an'ireo izay miteny kely ary roa hafa ho an'ireo izay maniry ny zava-drehetra. Tarehimarika efatra mahavariana.
Ny taha voalohany dia ho an'ireo izay sahirana mampiasa ny findainy ivelan'ny trano. Nieritreritra azy ireo i Amena ary nanolotra azy ireo 4GB, antso amin'ny 0 cents iray minitra ary SMS tsy voafetra ho an'ny € 6,95 / volana. Fa raha miresaka kely amin'ny findainao ianao dia mety hahaliana anao ny tahan'ny 10GB, minitra tsy voafetra ary SMS tsy voafetra ho an'ny € 9,95 isam-bolana.
Ny orinasa maitso dia manome anao drafitra finday misy 25GB, antso tsy voafetra ary SMS amin'ny € 19,95 / volana. Fa raha tsy ampy anao ny 10GB dia hahaliana anao bebe kokoa ny drafitra farany farany. Ny taha farany manome anao 30GB, antso tsy voafetra ary SMS amin'ny € 24,95 / volana.
Fantatray fa tena sarotra ny misafidy tahan'ny Amena, satria tena tsara izy ireo. Raha mbola tsy manapa-kevitra ianao amin'ity rohy ity dia afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa ianao.
Ny voasary Simyo dia tsy kisendrasendra ary ity koa orinasa iray an'ny vondrona Orange. Na izany aza, Simyo dia manana endrika tsy fahita firy sy tsy manam-paharoa: azonao atao ny mamorona ny tahan'ny anao manokana. Azonao atao ny manefy ny drafitrao amin'ny angona bebe kokoa na latsaka ary miaraka amin'ny minitra feo bebe kokoa na kely kokoa. Izay tianao.
Alohan'ny hanazavako ny fomba fiasan'ny fanamafisana ny tahan'ny namboarina dia tiako ny milaza aminao ny tahan'ny efa natolotr'i Simyo anao namboarina. Ny orinasa dia manome antsika ny tahan'ny efatra azontsika ifanarahana. Manana taha tsy misy quota izahay, izany hoe 0 euro. Manana taha kely izay misy antso 20 minitra sy 100MB amin'ny € 2 isam-bolana izahay. Tanjona tonga lafatra ho an'ny WhatsApp miaraka amin'ny antso 50 minitra ary 100MB amin'ny € 3,5 / volana. Ary ny preset farany dia ho an'ireo izay miresaka sy misedra matetika. Manolotra antsika 100 minitra sy 2GB amin'ny € 6,5 isam-bolana.
Raha tsy misy maharesy lahatra anao ny isa etsy ambony dia tadidio fa afaka mamorona anao manokana amin'ny fomba tena tsotra ianao. Ny zavatra voalohany tokony hofidinao dia ny angona hivezivezy amin'ny findainao. Tsy afaka misafidy angona ianao raha hizaha, fa ny 40GB ambony indrindra. Aorian'izay dia tsy maintsy misafidy ny isa minitra iantsoana ianao, manomboka amin'ny 0 minitra ka hatramin'ny antso tsy voafetra. Ny tolo-kevitray, amin'ity tranga ity, dia mazava be: ataovy ny tahan'ny anao. Tsy misy tsara noho ny mahay misafidy izay tianao holaniana amin'ny resaka data sy minitra amin'ny feo. Na izany aza, raha te hahita ny sisa azo atao omen'i Simyo ianao, midira eto.
Lowi dia iray amin'ireo orinasan-telefaona finday sarobidy indrindra amin'ny mpampiasa, noho ny vidiny ara-toekarena indrindra ary ny fahafaha-mamorona ny tahan'ny sitrakao tanteraka. Azonao atao ny mampifangaro ny tahananao manomboka amin'ny 8GB ka hatramin'ny 30GB data eo amin'ny findainao ary, raha ny resaka minitra feo dia manana antso tsy voafetra izy rehetra.
Raha tsy maintsy mijanona amin'ny iray amin'ireo sarany isika, dia tsy isalasalana fa ny tahan'ny Tenanao miaraka amin'ny 8GB amin'ny € 7,95 isam-bolana. Vidiny tena mifaninana ary tsy azo resena. Azonao atao ny mahita ny sisa azo atao isao eto ny toerana sy ny toetrany.
Inona ny tahan'ny nifanekenao ankehitriny ary iza no hovainao raha azonao atao? Araka ny hitanao, tsy misy farany ny azo atao ary miankina aminao ny zava-drehetra. Aza milamina ary miaraha manaraka amin'ity fidirana ity satria havaozinay isam-bolana. Ary raha mbola tsy hitanao ny tahan'ny tonga lafatra azonao atao dia azonao atao ny mampiasa ny Mampitaha roams telephony hahitana ny safidy tsara indrindra ahafahanao mitahiry.